Orinasa 0.3mm Silicon Coated Fiberglass Cloth ary mpamatsy | Chengyang
0.4mm Silicon Coated Fiberglass Cloth dia namboarina avy amin'ny lamba fiberglass base ary natsofoka na nopetahany sisiny na andaniny roa tamin'ny silipo vita amin'ny silika mifangaro. Noho ny tsy fitoviana ara-batana vita amin'ny silika vita amin'ny silika dia tsy vitan'ny fampitomboana ny tanjaka, insulation thermal, fireproof, fananana miaro tena, fa koa manana ny fanoherana ny ozone, ny fahanteran'ny oxygen, ny fahanterana, ny fahanteran'ny toetr'andro, ny fanoherana ny menaka ary ny fananana hafa.
0.4mm Silicon Coated Fiberglass Cloth dia namboarina avy amin'ny lamba fiberglass base ary natsofoka na nopetahany sisiny na andaniny roa tamin'ny silipo vita amin'ny silika mifangaro. Noho ny tsy fisian'ny fitrandrahana ara-batana vita amin'ny silika, dia tsy vitan'ny fampitomboana ny tanjaka, ny insulation thermal, ny fireproof, ny toetran'ny insulate, fa koa ny fanoherana ny ozone, ny fahanteran'ny oxygen, ny fahanterana, ny fahanteran'ny toetr'andro, ny fanoherana ny solika ary ny fananana hafa.
1) fanoherana hafanana miavaka (avy amin'ny -70 ° C ka hatramin'ny + 280 ° C)
2) fanoherana simika tena tsara
3) Ambony tsy miraikitra ambony, mora diovina
4) Herin'ny diélectrika avo
5) fitoniana refy
6) Fanoherana ny UV, IR ary HF
7) Non-misy poizina
2) Mpanontrona tsy metaly, azo ampiasaina ho mpampifandray amin'ny fantsona izy ary azo ampiasaina betsaka
ao amin'nysahan-solika,injeniera simika, simenitra ary angovo.
1.Petage Detail: Ny tsirairay ao anaty boaty baoritra, avy eo ao anaty boaty plywood, tranga Plywood mety ho fitaterana an-dranomasina.
Habe boaty 2.Wenen: iray metatra ny sakany avo
3. boaty hazo namboarina habe: 200sets
4.Settlement way: fandoavam-bola mialoha alohan'ny fanaterana ny famokarana entana, ny fandoavam-bola indray mandeha, na angonin'ny orinasa lozisialy.
Previous: Lamba Fiberglass amin'ny hafanana be
Manaraka: Lamba Fiberglass mainty
Lamba vita amin'ny lamba silika vera
Lamba vita amin'ny silipo vita amin'ny lamba Fiberglass
Lamba Fiberon'ny Carbon Red
Lamba Fiberglass Aluminium
Fiberglass mifono akrilika, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Clot Fiberglass, Lamba Fiberglass Aluminized,